Sunday September 16, 2018 - 06:45:35 in Wararka by
Qaraxa oo haleelay gaari uu lasocday mid kamida xildhibaannada Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhaliyay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah iyo burbur baaxad leh oo gaaray gaariga labeegsaday.
Maxamed Mursal Boorow oo ah xildhibaan ayaa si xun ugu dhaawacmay qaraxa oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Muqdisho, dhaawaca xildhibaanka oo garaab ah ayaa loola cararay isbitaal, wararka ayaa intaas ku daraya in qaraxa uu ku dhintay darawalkii xildhibaanka dhaawacmay.
Dhinaca kale war rasmi ah oo xalay saqdii dhexe kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayay ku sheegatay mas'uuliyadda qaraxa, qoraal kooban oo warbaahinta loo qeybiyay ayay Xarakadu ku xaqiijiyay in qaraxu uu beegsaday hadafkii loogu talagalay.
"Mujaahidiinta ayaa qarax aad u xooggan ku beegsaday gaari uu la socday mid kamida Xildhibaanada Golaha dawaaqiidda Murtadiinta xilli uu marayay meel aan sidaas uga fogeyn xarunta Madaxtooyada, macluumaadka hordhaca ah ee mujaahidiinta soo gaaraya waa in uu dhaawac garaab ah uu gaaray murtadka Nin darawal u ah uu ku dhintay qaraxa" ayaa lagu yiri warka Al Shabaab kasoo baxay.
Al Shabaab waxay ku goodisay in ay sii wadi doonto beegsiga Xildhibaannada Baarlamaanka oo ay ku eedeysay in ay isku magacaabeen sharci dajiyaal umadda sharci uga dhigay wax ay gacanta ku sameysteen meelna iska dhigay kitaabka Alle.
Sawirro lagasoo qaaday goobta qaraxu ka dhacay ayaa muujinayay gaariga XildhibaanMaxamed Mursal Boorow oo aad u burburay iyo xaalad anfariir ah oo xilligaas ka taagneed halka loo yaqaan Tiyaatarka Qaranka.